Rose of Sharon: ဗီယက်နမ်မှာ(၅)
Posted by rose of sharon at 4:05 PM
rose of sharon October 29, 2009 at 10:12 PM
29 Oct 09, 21:38
စည်သူ: ဘယ်လိုစဉ်းစားထားလဲ.. ခက်တော့ခက်တာပဲဗျာ..
စည်သူ: ဗီယက်နမ်မှာ မနေတော့ရင် မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့လား..
29 Oct 09, 21:37
စည်သူ: နောက်ဆုံးတော့ ဘယ်လိုလဲအမရာ...
စည်သူ: အိမ်ပဲပြန်ချင်ပါတယ်.. မတတ်သာလို့သာ နေနေရတာပါ..
29 Oct 09, 21:36
စည်သူ: ကိုယ့်လူမျိုးကို ကိုချစ်တယ်ပဲပြောပြော ဘာပဲပြောပြော ပြောချင်ရာပြောပါစေ.. ကျွန်တော်လည်း အမလိုပါပဲ..
စည်သူ: အင်းပေါ့ အမရယ်.. ဖတ်ရင်းနဲ့တောင် စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်..
29 Oct 09, 21:30
စည်သူ: အရင်ဆုံးနော်... ဟဲဟဲ..
29 Oct 09, 19:25
လသာည October 29, 2009 at 10:17 PM
ချစ်သောရိုစ်ရေ.. ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်ပြီး လွမ်းဆွတ်သလို စိတ်မကောင်းသလို ခံစားမိတယ်။ ဘယ်လိုအားပေးရမလဲတောင် မသိတော့သလိုဖြစ်သွားမိတယ်။ တို့တတွေက ပျော်ရာမှာမနေရ တော်ရာမှ နေရတဲ့ ဘ၀ဆိုတော့လည်း ရောက်ရာနေရာမှာ အဆင်ပြေအောင် ကြိုးစားကြရတာပေါ့ကွာ..။ အစစ အဆင်ပြေစေချင်တာပါပဲ..
ဒါနဲ့ ဒီနှစ်ဒီဇင်ဘာကို ရန်ကုန်ပြန်ဦးမယ်ဆိုတာ ပြန်ဖြစ်မှာလား? ပြန်ဖြစ်ရင်တော့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သားသားမီးမီးတို့ရော ရိုစ်ရော ပျော်နေမယ်ဆိုတာ ခံစားတွေးပြီး ကိုယ်တောင် ထပ်တူပျော်လာတယ်။
kiki October 29, 2009 at 10:19 PM
မိခင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ဆိုတာ ဒီဘလောဂ်လေး စ ဖတ်မိကတည်းက သတိပြု မိပါရဲ့ မရို့ စ်ရေ ။
့ကိုယ့်တိုင်းပြည် ဘယ်လောက်ပဲ ခေတ်နောက်ကျတယ်ပြော ပြော လူသားဆန်တဲ့ လူတွေလည်း ရှိနေကြသေးလို့ တော်သေးတာပေါ့လေ ။ မိဘဆွေမျိုးတွေရှိနေကြလို့သာ ပြန်ဖြစ်ကြတဲ့သူတွေ များပါတယ် ။
စိတ်ဝင်စားစရာ အတွေ့ အကြုံလေးတွေပါဘဲ ...
စကား မစပ် .. မြန်မာပြည် ပြန်ပြီးကလေးမွေးတဲ့ စရိတ်စက တွေ ကရော .. အံ့သြကုန်နိုင်ဘွယ်ပဲလား လို့ .. သိချင်ပါတယ် ..
ThuHninSee October 29, 2009 at 10:38 PM
:) သမီးလေးက မြန်မာလိုနားလည်လားဟင်။ ချစ်စရာကောင်းတယ်နော်။
သားလေးခမျာ ငယ်ငယ်လေးနဲ့ရှုဆေးမှုတ်ရတာ သနားပါတယ်။ အခုရော ကျန်းမာနေပြီမဟုတ်လား။
မိုးစက်အိမ် October 29, 2009 at 11:10 PM
မကြီး တူလေးနဲ့ တူမလေးက မြန်မာလိုနားလည်လားဟင်
ဗီယက်နမ်လိုရော တတ်ကြလား . . . ကလေးတွေအကြောင်း
ဖတ်ရတာ ကောင်းတယ်အမရေ . . . ဘာပြောပြော အမရေ
အမပြောသလို ပြင်သစ် OG နဲ့မြန်မာ OG ကွာသလိုပေါ့
အရေးနဲ့ အကြောင်းဆိုရင် ကိုယ်မြေ ကိုယ့်ရေ ကိုယ်မိသားစုက
အလုံခြုံဆုံး အနွေးထွေးဆုံးပါဘဲ အမရေ . . .
အနော် October 30, 2009 at 12:23 AM
အိမ်နီးနားချင်း မိတ်ဆွေကောင်းတွေရှိတာ တကယ့်ကို ဘုရားပေးတာပါပဲ
ချစ်စရာ သားလေးနဲ့ သမီးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရထားတဲ့ မမကတော့ ပျော်ရမှာပါနော်
မောင်လေးက အသက်ရှုလမ်းကြောင်း မှုတ်စက်လေး သုံးရတာ ဖတ်ပီး စိတ်မကောင်းလိုက်တာ
ကိုယ်တောင်နေမကောင်းလို့ နှာပိတ်ရင် ဘယ်လောက် ခံရခက်လဲနော်
ဒီနှစ် ဒီဇင်ဘာရော ပြန်ဖြစ်မယ်ဟုတ်
မမတို့ မိသားစုလေး အေးချမ်းပျော်ရွှင်ကြပါစေနော်
Shinlay October 30, 2009 at 12:47 AM
sonata-cantata October 30, 2009 at 8:03 AM
ကလေးတွေဆိုပြီး လျော့မတွက်နဲ့.. သူတို့က မေတ္တာတရားကို အဖြူစင် အရိုးရှင်းဆုံး ခံစားတတ်တယ်နော်။
အမတို့လည်း အခွင့်သာတိုင်း ပြန်ပါတယ်။ ကလေးတွေကိုလည်း သွားလေရာခေါ်တယ်။ အရွယ်ရောက်လာရင် စိတ်တွေက ပြောင်းသွားတော့မှာလေ။ အဲ့အချိန် ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတာနဲ့ သူတို့ စိတ်ဝင်စားတာ ဘယ်လိုမှ မတူနိူင်တော့ဘူး။ ငယ်တုန်းမှာ သူတို့ စိတ်ထဲ ရောက်ခဲ့တဲ့ ဟာလေးတွေကတော့ တသက်လုံး စွဲသွားပြီမို့ အဲ့ဒီအခံလေးနဲ့ နောင်အရှည် မိဘနဲ့ သားသမီးကြား အမြင်တွေ၊ ဆက်ဆံရေးတွေကို ဆက်ဟပ်ယူရမှာလေ။
နှင်းဆီပန်းချစ်တဲ့ကောင်မလေး October 30, 2009 at 8:56 AM
မမရေ သားသားလေးက ငယ်ငယ်တုန်းကလဲ ချစ်စရာလေးနော်။
ရန်ကုန်ပြန်တိုင်း လေဆိပ်ရောက်ရင် မချင့်မရဲဒေါသထွက်ရတယ်။
ကိုယ်နိုင်ငံဆုတ်ယုတ်မှုတွေ မြင်တိုင်းး အဘတွေကို စိတ်တိုမိဒယ်။
ဘာဘဲပြောပြော ဘယ်နိုင်ငံဘယ်လောက်တိုးတက်တိုးတက် မိဘဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းအရိပ်လောက်တော့ ဘယ်အေးမြမလဲမမရယ်။
မေလေးလဲမမသမီးလေးလိုဘဲ အိမ်ကိုအလည်ပြန်ပြီး စလုံးကိုပြန်လာတိုင်း ငိုရတယ်။ တလလောက်လဲအလွမ်းသယ်လို့မပီးနိုင်ဘူး။
ဒါပေမဲ့လေ ပျော်ရာမှမနေရ တော်ရာမှာနေရဆိုသလိုဘဲ
စလုံးခဏခဏလာလည်တယ်ဆိုတော့ နောက်တခါလာရင် အိမ်ကိုလာလည်နော်။မမတို့စားချင်တာချက်ကျွေးမယ်။
သားကြီး October 30, 2009 at 2:21 PM
လုပ်ရက်လိုက်ကြတာ တိုးတက်ရက်လိုက်ကြတာ :P
ကိုရေတမာ October 30, 2009 at 2:54 PM
မိခင်တယောက်ရဲ့ ဒုက္ခ၊ သောကအပူ။ မေတ္တာတရားတွေ တွေ့ရတယ်။ အမတို့မိသားစု ကျန်းမာ ပျော်ရွင်ပါစေ။
ဝက်ဝံလေး November 3, 2009 at 12:56 AM
သားလေး ပါးကို ကိုက်ပစ်ချင်တယ် ဟီးးးးးးးးးး
rose of sharon November 3, 2009 at 11:09 AM
စည်သူရေ... ခုထိတော့နေ နေရတုန်းပါဘဲ....
လသာညရေ.... ဒီဇင်ဘာပြန်မှာသေချာတယ်... ဘာမှာအုန်းမလဲ
Kikiရေ.... ရန်ကုန်ပြန်ခလေးမွေးရတာ သမီးတုန်းကတော့ သိပ်မကုန်ပါဘူး... သားအလှည့်မှာ နိုင်ငံတကာဆေးရုံရှိနေပြီဆိုတော့ တော်တော်ကုန်သွားတယ် :D
သုနှင်းဆီ... သမီးလေးကမြန်မာလို ကောင်းကောင်းပြောတတ်ပါတယ်... ရန်ကုန်ကအမျိုးတွေနဲ့ မြန်မာလိုဘဲဖုန်းပြောနေကျပါ..
မိုးစက်အိမ်.... ခလေးတွေမြန်မာလိုနားလည်ပါတယ်... ဗီယက်နမ်လိုတော့သိပ်မတတ်ပါဘူး
မသီတာ... ကျေးဇူးမသီတာ... မသီတာလဲမိခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဆိုတာ ကျမသိပါတယ်... လာလည်ပြောပြပေးတာတွေအတွက်ကျေးဇူးပါ
rose of sharon November 3, 2009 at 11:11 AM
သားကြီး.... ဟုတ်ပနော် :D လာလည်သွားတာကျေးဇူး
ကိုလူထွေး November 7, 2009 at 8:54 PM
Angel Shaper November 16, 2009 at 3:33 PM
မလို မိခင်ကောင်းရဲ့ ကလေးတွေဖြစ်ရတာ မောင်လေးနဲ့ ညီမလေးတို့ ကံကောင်းတယ်။ ပျော်စရာမိသားစုလေးဖြစ်ပါစေ။ ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေး လမ်းပြပါစေနော်။
သက်ဝေ November 17, 2009 at 12:17 PM
"နီးနီးနားနား စင်္ကာပူနိုင်ငံကိုတော့ ပိုသွားဖြစ်တယ်..."
နောက်တခါ လာလည်ရင် ပြောနော်...